တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ပြု ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ ခေါ်ယူခြင်း
တက္ကသိုလ်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် ထပ်မံ ပါဝင် အားဖြည့်မည့် တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ပြု ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင် လျောက်လွှာများကို ၅.၂.၂၀၁၉ မှ ၇.၂.၂၀၁၉တွင် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂရုံးခန်း၌ ကျောင်းနားချိန်များတွင် ထုတ်ယူလျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
အဖွင့်ဝင်အဖြစ် လျောက်ထားသူ ကျောင်းသား/သူများသည် ၁၁.၂.၂၀၁၉မှ စ၍ ၈.၃.၂၀၁၉ထိ နေ့စဉ် ကျောင်းဖွင့်ရက်များတွင် ညနေကျောင်းဆင်းချိန်နှင့် ကျောင်းပိတ်ရက်များ၌ နေ့လည်ပိုင်းများတွင် သင်တန်းတက်ရောက် လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းသား ဦးရေ (၆၅)ဦးသာ လျောက်ထားရန် ကန့်သတ်ထားပြီး ဘွဲ့ကြိုတန်းများမှ အတန်းငယ် ကျောင်းသား/သူများကို ဦးစားပေးခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းပြီးဆုံးသည်ထိ တက်ရောက်အောင်မြင်သူ သင်တန်းသားများသည် တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ပြုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရမည် ဖြစ်သည်။
🎷OpenCall for University Drum and Bugle Corps🎷
To organize University Drum and Bugle Corps which would help to support physical development of the University,you can apply for registration forms at the office of Students’ Union during break times from 5.2.2019 to 7.2.2019.
Students who apply to be new members will have to attend the training in the evenings after the school on weekdays and in the afternoons on weekends from 11.2.2019 to 8.3.2019.
Members are limited to 65 and junior years students in pre-graduates will be favored.
Students who completely finish the course will take part in University Honors Programs.